भारित औसत गणना के हो ?
अहिलेको सरकार शेयर बजारप्रति अनुदान नै छ भन्ने पछिल्लो घटनाले देखाएको छ । शेयर बजारले गति लिन आँट्यो कि केही नयाँ बखेडा झिकेर लगानीकर्ता अत्याउन सरकारी निकाय लागिपरेका छन् । पूँजीगत लाभकर, प्यान र भ्याटको विवाद, सम्पत्ति शुद्धीकरणको हल्ला र अहिले आएर भारित औसत गणनाको कुरा उठाएर बजारलाई अन्योलतर्फ धकेलिएको छ । यसैको परिणाम साउन महीना लागेपछि बढ्ने अपेक्षा गरिएको र यसको संकेत समेत देखाएर बजार ओरालो लाग्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय पुराना लगानीकर्ता समेत आत्तिएका छन् । उनीहरू शेयर बजारबाट बाहिर निक्लने हो कि भन्ने सोच्न थालेका छन् । आर्थिक विकासका लागि पूँजी बजार आवश्यक हुन्छ पनि भन्ने तर पूँजी बजारमा नयाँ नयाँ अत्तो थापेर लगानीकर्ता अत्याउने काममा सरकार लागिरिरहेकाले नै वर्तमान सरकार शेयर बजारप्रति अनुदार भन्ने लगानीकर्तामा परेको हो ।
सरकारले पूँजीगत लाभकरको दर घटाउँदा हामी उत्साही भएका थियौं । पूँजीगत लाभकर निर्धारणको प्रक्रियाले अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको शेयर बजारलाई पुनः कागजी युगमै धकेल्ने प्रयास किन भइरहेको छ रहस्यमय छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लाभ गणना गर्दा भारित औसत लागतको आधारमा गणना गर्नु पर्नेछ । भारित औसतका आधारमा लगानीकर्ताले पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, भारित औसत लागत कसरी निकाल्ने ? हामी लगानीकर्ता अन्योलमा छौं । निकै वर्ष अघि ज्यादै महँगोमा शेयर किनेका छौं । तर अहिले त्यसको कुनै निस्सा हामीसँग छैन । भारित औसत दर निकाल्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग डाटा हुनुपर्ने हो । तर पुराना डाटा छैन भने त हामी पुराना लगानीकर्ता डुब्ने निश्चित छ । मानौं कसैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको शेयर ४ हजारमा किनेको थियो भने अब यसले घाटा खाएको शेयरमा पनि कर तिर्नुपर्ने भयो । बैंकले दिएको बोनस शेयर र लाभांश सबै जोड्दा पनि घाटा भएको अवस्थामा लाभ कर तिराउनुु भनेको अन्याय नै हो । त्यसैले शेयर बजारबाट लगानीकर्ताहरु बाहिरिन थालेको संकेत मिलेको छ ।
तस्वीर : बन्दाबन्दीको बेला रिक्त ताजमहलको परिसरमा बसिरहेका एक सुरक्षाकर्मी
मलेरिया र एचआईभीको औषधीको संयोजन प्रभावकारी भएन : डब्ल्यूएचओ